फ्रिज र फ्रीजर को आदर्श तापमान | बेजिया
फ्रिज र फ्रीजर को आदर्श तापमान
मारिया vazquez | 10/05/2022 12:00 | पाक कला
दुई वर्ष पहिले हामीले बेजियामा कुञ्जीहरू साझा गरेका थियौं अधिक कुशल भान्सा छ। त्यसपछि हामीले विद्युतीय उपकरणहरूको दक्षता र उचित प्रयोग दुवैको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्यौं, उल्लेख गर्दै। आदर्श फ्रिज र फ्रीजर तापमान.
आज हामी यस तापक्रमको महत्वलाई विश्लेषण गरेर अलि अगाडी बढ्छौं जसमा यो निर्भर हुन्छ, खानाको संरक्षण मात्र होइन, बिजुली बिल मा बचत। के तपाइँ तपाइँको रेफ्रिजरेटर वा फ्रिजर स्थापना हुँदा तपाइँ कुन तापमान सेट गर्नुपर्छ जान्न चाहनुहुन्छ?
1 उपयुक्त तापमान को महत्व
2 आदर्श तापक्रम
2.1 म कसरी तापमान समायोजन गर्छु?
उपयुक्त तापमान को महत्व
शीतलतालेaसिर्जना गर्दछ सूक्ष्मजीवहरूको मन्द वृद्धि जस्तै ब्याक्टेरिया जुन खानामा पाइन्छ, यसलाई उपभोगको लागि राम्रो सुरक्षा अवस्थामा राखेर। ध्यान दिनको लागि पर्याप्त महत्त्वपूर्ण कुरा, के तपाईंलाई लाग्दैन?
सही तापमान छनोट गर्नाले तपाईलाई सुरक्षित गर्न अनुमति दिनेछ लामो ताजा खाना र/वा राम्रो अवस्थामा। यसरी तपाईले यसको उपभोगबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई मात्र होइन खाद्यान्नको फोहोरलाई पनि कम गर्नुहुनेछ। र होइन, सधैं चिसो तापक्रम छनोट नगर्नु जुन उपकरणले हामीलाई अनुमति दिन्छ, उत्तम निर्णय हो। तपाईंले अनावश्यक रूपमा ऊर्जा खर्च गरिरहनुभएको हुन सक्छ र केही खानेकुराहरू चाँडै खराब हुन सक्छ।
फ्रिज र फ्रीजरहरू सम्मको लागि खाता कुल बिजुली लागतको 22% IDAE अनुसार घरहरूको र OCU अध्ययन अनुसार 31% सम्म। छन् अधिक ऊर्जा खपत गर्ने उपकरणहरू, किनकि तिनीहरू लगातार गर्छन्। र हामीले तपाईंको थर्मोस्ट्याटलाई कम गर्ने प्रत्येक अतिरिक्त डिग्री सेल्सियसको मतलब ७ र १०% बीचको बिजुलीको अतिरिक्त लागत हुन सक्छ। महिनाको अन्त्यमा लागतमा वृद्धि हुने प्रतिशत।
यी सबैभन्दा बढी खपत गर्ने उपकरणहरू हुन्
विशेषज्ञहरु र निर्माताहरु को सिफारिशहरु अनुसार la इष्टतम रेफ्रिजरेटर तापमान लगभग4डिग्री सेल्सियस छ. यद्यपि तिनीहरू थोरै भिन्नताहरूसँग योग्य हुन्छन् जुन2र 8 डिग्रीको बीचमा हुन सक्छ, फ्रिज कति खाली वा भरिएको छ भन्ने आधारमा। र यो हो कि खाना सुरक्षित गर्न र फ्रिजले राम्रोसँग काम गर्नको लागि आदर्श तापमान कायम राख्नको लागि, त्यहाँ दिशानिर्देशहरूको एक श्रृंखला हो जुन तपाईंले पालना गर्नुपर्छ:
तातो खाना परिचय नगर्नुहोस्; तिनीहरूलाई यसमा भण्डारण गर्नु अघि सधैं चिसो हुन दिनुहोस्।
यसलाई सबै बाटो न भर्नुहोस्, चिसो हावा को मुक्त परिसंचरण अनुमति दिन। र यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तापमान एक डिग्री कम गर्नुहोस्।
सधैं बचत गर्नुहोस् झोलामा राखिएको खाना वा एयरटाइट कन्टेनरहरू।
फ्रिज साप्ताहिक जाँच गर्नुहोस् र अब राम्रो अवस्थामा नभएको खाना हटाउनुहोस्।
सधैं सफा राख्नुहोस्, कुनै पनि प्रकारको तरल पदार्थ हटाउने जुन फैलिएको हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, आदर्श फ्रीजर तापमान -17°C वा -18°C को बीचमा छ। थप रूपमा, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि सम्भावित परजीवीहरू (जस्तै माछामा एनिसाकिस वा मासुमा टक्सोप्लाज्मा गोन्डी) ले स्वास्थ्य जोखिम नपार्ने, उपभोग गर्नु अघि कम्तिमा5दिनसम्म खाना फ्रिज गर्न आवश्यक हुनेछ।
म कसरी तापमान समायोजन गर्छु?
यो सामान्य छ कि जब हामी रेफ्रिजरेटर किन्छौं, तिनीहरू आउँछन्, यसलाई हाम्रो लागि स्थापना गर्छन् र हामी तापक्रम जाँच गर्न र आवश्यक भएमा समायोजन गर्न बिर्सन्छौं। सबैभन्दा आधुनिक र/वा उच्च-अन्त रेफ्रिजरेटरहरूमा, यो सञ्चालन मार्फत गर्न सकिन्छ डिजिटल नियन्त्रणहरू। यी सामान्यतया फ्रिजको अगाडि वा ढोकामा अवस्थित हुन्छन्। पुरानो वा कम-अन्त रेफ्रिजरेटरहरू, तथापि, यी नियन्त्रणहरू छैनन् र भित्र एक नियन्त्रण पाङ्ग्रा लुकाउनुहोस्।
La नियन्त्रण चक्र यसमा केहि संकेतकहरू छन् जसले हामीलाई तापमान विनियमित गर्न अनुमति दिन्छ। यी सूचकहरू सामान्यतया 1 देखि7वा 1 देखि 10 सम्मका संख्याहरू हुन् जुन तापक्रमसँग सीधै सम्बन्धित छैनन् तर तीव्रतासँग (जति बढी संख्या, चिसो)। यी अवस्थाहरूमा, तापक्रम कस्तो छ भनेर थाहा पाउने एक मात्र तरिका भनेको थर्मोमिटरलाई फ्रिजमा राखेर हामी त्यो आदर्श तापक्रमको नजिक नपुगेसम्म पाङ्ग्रासँग खेल्ने हो।
के तपाईलाई थाहा छ रेफ्रिजरेटर र फ्रिजरको आदर्श तापक्रम कति थियो? के तपाइँ यो लेख पढे पछि तपाइँको उपकरणहरू समीक्षा र अद्यावधिक गर्नुहुनेछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » पाक कला » फ्रिज र फ्रीजर को आदर्श तापमान
Eurovision 2022 जित्नका लागि ठूला मनपर्नेहरू